ပန်းမာရ်ပြပွဲ (III)(EcoArk Pavilion) Taipei International Flora Expo | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ပန်းမာရ်ပြပွဲ (III)(EcoArk Pavilion) Taipei International Flora Expo
ပန်းမာရ်ပြပွဲ (III)(EcoArk Pavilion) Taipei International Flora Expo
Posted by zoe on Feb 13, 2011 in Arts & Humanities, Cultures, Events/Fundraise, News, Photography, Society & Lifestyle, Travel, World News |7comments
FE EcoArk Pavilion Recycled PET Bottle Sichuan Earthquake) Taipei International Flora Expo Typhoon Nari
ရွမ်ရှန်းဧရီရာ (YuanShan Area Park) ဇုံ က FE EcoArk Pavilion ဟာ သုံးပြီး ပလတ်စတစ် ဘူး ခွံ (Recycled PET Bottle)နဲ့ တည်ဆောက်တဲ့အဆောက်အဦး ဖြစ်တယ် ။ဒီအဆောက် အဦး ဟာ ၁၃၀ မီတာ အလျှား ရှိ ပြီး ၃ထပ်တိုက် အမြင့် ရှိတယ် ။ ပေါ့ပါး ပေ မဲ့ အင်မတန်အောက်ခြေ ခိုင်ဲ တယ်။ အပူချိန် ၂၃၀ ဒီဂရီ C နဲ့ (Typhoon Nari)နာရိထိုင်ဖုန်း (2001) ပြင်းအား ထက် ၁. ၅ ဆ ဒဏ် ကိုခံ နိုင်ရည်ရှိတယ် ။ ၉၂၁ (921 Earthquake)(1999)နဲ့ တရုတ်ပြည် စီချွန်း မြေငလျှင်(Sichuan Earthquake)်(2008) ထက်ပြင်းတဲ့ငလျှင် ဒဏ် ကို ခံ နိုင် ကြောင်း။ ပလတ်စတစ် ဘူး ခွံ တသန်း ခွဲ နဲ့ဆောက် ထားတာ ဖြစ်တယ် ။ ဒါ ဟာ Recycled ပလတ်စတစ် ဘူး ခွံ ကနေ ဆောက် တဲ့ ပထမဆုံး အဆောက်အဦးဒီဇိုင်း ဖြစ်တယ် ။
နံရံ ကို POLLI-BRICK နဲ့ ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ပျားအုံ ပုံ ခြောက်မှောင့် ပုံ ဖြစ်တယ် ။ အဆောက်အဦး ကို LEGO အရုပ် လို ဖြုတ် ပြီး ပြန် ဆက်နိုင်တယ် ။
TAIPEI, Taiwan — A Taiwan company has builtathree-story exhibition hall using 1.5 million plastic bottles instead of bricks to raise interest in recycling, creating what the builder described asaworld-first.
Far Eastern Group,aTaiwan-based conglomerate known for construction and financial services, commissioned the 130-meter (426-foot) long, 26-meter (85-foot) high structure almost three years ago and will donate it next month to the city government.
The pavilion, dubbed the EcoARK, includes an amphitheatre, museum space andascreen of falling water collected during rainy periods for air conditioning. The clear plastic containers in the wall allow natural light to flood the cavernous interior. Far Eastern will donate the NT$133 million (US$4.22 million) building to the city next month for use asafashion pavilion duringaflora exhibition in November, Huang said.
ကိုယ် တိုင် ရိုက် ပုံ လည်း တင် လိုက် ပါ တယ် ။
ဆက် ရန် Recycledဘူး ခွံ တွေ စု တုံးက bonus points နဲ့သွား လဲလိုက် သေး တယ် ။
တယ်ဟုတ်ပါလားzoe ရဲ့ . ၀ယ်မယ်လို့ကြေညာထားတာလား၊
ဝယ် ချင် သား ပဲ ။Dollar ရှိ ရင် …:)
ပန်းဆိုတာ .. ပန်ဆယ်မျိုးကိုဆိုလိုလိုက်တာလားတော့မသိ..
ပလပ်စတစ်အဆောက်အဦးအကြောင်းဖြစ်နေတယ်.။ လှပြီး..ဆန်းတာတော့ တော်တော်ဆန်းတယ်..။
(ဖလားဝါး)ပန်းပြပွဲနဲ့ တခုခုများ .သက်ဆိုင်နေသလား..။
အဲဒီထဲမှာ ..ပန်းပြပွဲလုပ်လိုက်သလား..။ ဇုံတူနေတာလား..။
ဟုတ် တယ် ပန်း နဲ့မ ဆိုင်ဘူး ဖြစ် နေ တယ် ။ ဒီ EcoArk Pavilion က ရွမ်ရှန်း ဇုံ ထဲ မှာဆောက် ထား တာ ။ Technology ကို အ ခွင့်သာ တုံး ပြ ထားသလို ဖြစ် နေ တယ် ။
ပလပ်စတစ် ဘူးခွံ နဲ့ ဆောက်တာ သဘောကျတယ် အဲဒီ နည်းပညာတွေ ထွန်းကားလာရင် ပိုလျှံနေတဲ့ ပလပ်စတစ် အသုံးဝင်တာပေါ့နော်။
တော်ကြာ ထပ်လာအုန်းမလား မသိဘူး အဲလို အိမ်မှာ နေရင် လူတွေ ကင်ဆာ ဖြစ်တယ် ဘာညာကွိကွ
ဟုတ် တယ် အမှိုက် က ရွှေ ဖြစ် တဲ့ သဘော ပဲ ။